दीपक मनाङेले मागे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भन्छन् फेरी पनि एमालेसंगै मिलेर चुनावमा जान्छु नत्र राजनीति नै गर्दिन – Kavrepati
Home / समाचार / दीपक मनाङेले मागे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भन्छन् फेरी पनि एमालेसंगै मिलेर चुनावमा जान्छु नत्र राजनीति नै गर्दिन
admin June 21, 2021	समाचार Leaveacomment 85 Views
काठमाडौ । गण्डकी प्रदेशमा विना विभागीय मन्त्री दीपक मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफुलाई दिन माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा उनलाई विना विभागीय मन्त्री राखेका छन् ।
हाम्रो अहिले ७ वटा जिल्ला बाढी पहिरोबाट प्रभावित छ । त्यस क्षेत्रको चिन्ता हो । म आफै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भए हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु एकदमै जरुरी र महत्वपूर्ण छ, उनले अन्तरवार्ताका क्रममा भनेका छन्, मैले त मनाङको विकास हेर्ने हो ।
मलाई जिताउनमा पनि कसैको योगदान छैन । आफ्नो जिल्लामा बजेटको ओइरो हाल्ने तर मनाङजस्तो सडक समेत नभएको जिल्लामा बजेट नदिने ? मैले यिनिहरूलाई नमस्ते गरेर बस्ने होइन ।
Previous भोलि देखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन नपाउदै आयो सोच्नै नसक्ने यस्तो दुखद खबर: अवस्य पढ्नुहोस
Next अजयसंग नभएको भए के शाहरुखसंग विवाह गर्थिन काजोलले ? यो प्रश्नमा काजोलले दिइन् यस्तो जवाफ